कलाकारलाई नरुवाउँ , सम्मान गरौ – Ram Kumar Pariyar
Next ज्येष्ठ २१ र छुवाछूत मुक्ती
Previous मृगौला रोगी तेजबहादुर नेपालीलाई सहयोगको अपिल
अनुभुती · २०७३ बैशाख ६ 0
रामकुमार परियार |	२०७३ बैशाख ६
हिजो साँझ ७ बजे नायिका प्रियंका कार्किले एउटा स्टाटस लेखिन । “मेरो मन रुवाउनेहरुको लागि…” भनेर । त्यो पढ्दै गर्दा मन धेरै दुख्यो । जबकी एक मिनेट पढ्दैमा मेरो मन दुख्यो भने रातदिन भोग्दा उनको मन कति रोएको होला ? हामी कलाकारलाई राष्ट्रको गहना भन्छौं , गौरव भन्छौँ । तर के हामिले हाम्रो गहनालाई गर्नुपर्ने जति माया गरेका छौँ त ? राष्ट्रको गौरवलाई गर्नुपर्ने जति सम्मान दिएका छौँ त ?
अहँ छैन , बिल्कुल छैन । बरु हामी गालि दिन्छौँ , अनेक तुच्छ शब्दहरुले प्रहार गर्छौं । हामि कति चरित्रवान छौँ हगि ? जसले सिंगो नेपाली फिल्म ईडष्ट्री धानिरहेको छ उसलाई यसरी गालीको सम्मान दिन्छौँ , हामी कति निच रहेछौँ त ?
नायिका/मोडलहरुले सामान्य अंग प्रदर्शन गरेकै भरमा ‘वेश्या’ भन्छौं , ‘भालु’ भन्छौँ (यि शब्दहरु प्रयोग गर्न नचहाँदा नचहाँदै लेख्नु पर्‍यो ।) । तर नेपाली संस्कृति माथी खुलमखुल्ला प्रहार गर्दै नाङ्गो नाच देखाउने ज्योती मगर र अर्चना पनेरुलाई हेर्न मात्रै ५००० को टिकट काटेर दगुर्छौँ । यो कतिसम्म न्यायोचित होला ?
नायिका प्रियंका कार्किको उक्त स्टाटस हेरिसकेपछी उनको वालमा आएका कमेन्टहरु हेर्न मन लाग्यो । अरुबेला म उत्ति हेर्दिन थिएँ , तर हिजोको उनको क्रन्दनले मनमा जिज्ञासा उब्जाई दियो । उनका केही पछिल्ला फोटोहरुको कमेन्ट पढ्न थालेँ , यति निच र घृणित व्यक्तिहरुको टिप्पणी पाएँ कि भनी साध्य छैन । लाग्छ यिनी मुम्बईको कुनै कोठीबाट आएकी हुन । यत्ती सम्म भनेका छन् । काठमाडौमा यौन व्यवसाय गरेर बस्ने युवती झैँ सोचेर निच कमेन्टहरु गरेका छन् जंगलीहरुले । चाहे मुम्बईको कोठिमा यौन व्यवसाय गराईएकी युवती हुन या काठमाण्डौकी कर्ल गर्ल । हरेकको आफ्नो ईज्जत् हुन्छ , परिवार हुन्छ । व्यक्तिगत जीवन हुन्छ । यो कुरा बुझ्दैनन हँ मान्छेहरु ?
यहाँ त अझ कलाकारको सवाल छ , कलाकार भित्रको पनि असल कलाकारको प्रसंग छ । हुन त यहाँ कलाकारिताको नाउँमा नाङ्गो नाच देखाउनेहरुको कमि भएको भने होईन । तर २/४ जनाले त्यस्तो गरे भन्दैमा सबैलाई ‘एउटै क्याटोगरी’ मा राख्नु त भएन नि । के प्रियंका कार्की र ज्योती मगरलाई एउटै नजरले हेर्न मिल्छ ? लोक गायिकाको नाउँमा नेपालको पुरातन संकृतीलाई कलंकित पार्दै हिंड्ने छाडा र शालिन अभिनय गर्ने लोकप्रिय नायिका बिच कदापि तुलना हुन सक्दैन । हिरा र किरा छुट्याउन नसक्नेहरुले के सामाजिक संजाल चलाउनु र भन्या !
म प्रियंका कार्कीको एकदमै नजिकको फ्यान होईन । उनलाई व्यक्तिगत रूपमा राम्रोसँग चिनेको पनि छुईन । तर लगभग सबै चलचित्रहरु हेरेको छु । फिल्म लाईनमा आउनु अघि देखि नै उनलाई जान्दछु म । उनको ग्ल्यामरस सभ्य छ , नेपाली समाजमा पच्ने छ । नायिका भईसकेपछी त्यति ग्ल्यामरस त अपरिहार्य नै मानिन्छ । तर हाम्रो सोच कहिले परिवर्तन हुन सकेन । भन्नलाई २१ औँ शताब्दीका आधुनिक पुस्ता भन्छौँ तर सोच कुन्नी कुन शताब्दीको मान्छेको बोकेका छौँ कुन्नी उदेक लाग्छ ।
म कलाकारलाई सम्मान गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे । तर कलाकार भित्रका पनि अकलाकार चैँ छुट्याउनु पर्छ भन्ने सोच छ । किनकि पछिल्लो समय हामिकहाँ कलाकारिताको यति विकास भएको छ कि भनी साध्य छैन । जो नि मोडल , जो नि नायक , जो नि गायक , जो नि नायिका , जो नि गायिका … तर यी सब कलाकार होईनन । कलाकार भित्रका अकलाकार हुन । यी अकलाकारको विकृत हर्कतकै कारण आज असल कलाकार यसरी सामाजिक संजालमा रुनु परेको छ । दु:ख लाग्छ । त्यसैले एउटा आग्रह कलाकारलाई सम्मान गरौँ । अकलाकारलाई कलाकार बन्न प्रेरित गरौँ । बैशाख ६ , सोमबार